အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း Card ကိုဝှကျထား, HID PROXCARDⅡCard, HID 1326 ထူသောကတ်, HID ISOCARDⅡ Card, HID 1386 ကဒ်, HID DUOCARDⅡ Card, HID 1336 သံလိုက်မြှောင် Card ကို, HID MICROPROX Signage, HID 1391 Signage Tag, PROXKEYⅡ Keychain HID, HID 1346 Keychain, HID PROXCARD PLUS Card, HID 16X Card
 » RFID Card ကို » ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ် » HID Card ကို
အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း Card ကိုဝှကျထား
HID Card ကို HID 1326 ထူသောကတ်, HID 1336 သံလိုက်မြှောင် Card ကို, HID 1346 Keychain, HID 1386 ကဒ်, HID 1391 Signage Tag, HID 16X Card, HID DUOCARDⅡ Card, HID ISOCARDⅡ Card, HID LF Card, အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း Card ကိုဝှကျထား, HID MICROPROX Signage, HID PROXCARD PLUS Card, HID PROXCARDⅡCard, PROXKEYⅡ Keychain HID
PROXCARD Ⅱ: often called 1326 အထူကတ်များ.
ISOCARD Ⅱ: often called 1386 ပါးလွှာကတ်များ.
HID 1326 အထူကတ်များ
အရွယ်: 86.054,0 × 1.90mm ×; ပုံနှိပ်ပုံရိပ်တွေများအတွက်, ကော်တံဆိပ်များကိုသုံးပါ (သီးခြားစီရောင်းချခဲ့) စံ RFID ကတ်များနှင့်အတူ
မှတ်ဉာဏ်: အများဆုံး 84bits
အပူချိန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်: -45ကို C ~ + 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
Reading အကွာအဝေး: 2~ 10cm
HID 1386 ပါးလွှာကတ်များ
အရွယ်: 86.054,0 × 0.80mm ×;တိုက်ရိုက်ပုံရိပ်တွေ print ထုတ်မှမျက်နှာပြင်ရရှိနိုင်ပါသည်ပရင်တာ; longitudinal သို့မဟုတ် transverse အပေါက်လာကြတယ်ဖြစ်နိုင်သလား
HID 1346 keyfobs / / key ကိုချည်နှောင် HID key ကိုကွင်း HID
အသေးစားအရွယ်အစား, သော့ချက်လက်စွပ်မှချည်ထားသောနိုင်ပါသည်;အားလုံး HID စာဖတ်သူနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်
HID 1341 ကတ်များနှင့် Mifare ပေါင်းစပ်
ဒြပ်ပေါင်းများ IC ကတ်များနှင့် ID ကိုကတ်များ Is
အားလုံး HID ကဒ်ပုံစံများကိုထောက်ပံ့
က ISO စံအထူနှင့်အတူလေးစားလိုက်နာခြင်း; ကိုမဆိုတိုက်ရိုက်ပုံရိပ်နှင့်အပူလွှဲပြောင်းပရင်တာနှင့်အတူအသုံးပြုရနိုင်သလား
② HID Proprietary 37 ပုံစံ: H10302
prev: လိုက်ဖက်တဲ့ HID Card ကို, 26နည်းနည်း / 36bit / 37bit / 40bit အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ
နောက်တစ်ခု: PROXKEYⅡ Keychain HID, HID 1346 Keychain
လိုက်ဖက်တဲ့ HID Card ကို, 26နည်းနည်း / 36bit / 37bit / 40bit အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ